kbs — Mon, 11/30/2009 - 15:09
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (१९६६-२०१६) प्रकृतिका कवि हुन् । यिनका प्रायः कविता-काव्यहरूमा प्रकृतिको महिमा गाइएको छ । सुन्दरीजल, सन्ध्या, झञ्झाप्रति, रानीवनमा, ज्वरशमना प्रकृति आदि कविताहरू प्रकृतिकै महत्व दर्शाउने गरी प्रस्तुत भएका छन् । कुञ्जिनी, म्हेन्दु, लूनी आदि खण्डकाव्य र शाकुन्तल, वनकुसुम आदि महाकाव्यहरूमा कविले विभिन्न कोणबाट प्रकृतिको महिमागान गरेका छन् ।
'मुनामदन' खण्डकाव्य महाकवि देवकोटाको लोकप्रिय कृति हो । यसको रचना वि.सं.१९९२ मा भएको थियो । यस खण्डकाव्य अद्यापि उतिकै प्रिय छ । नेपाली साहित्यमा सबभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तकको रूपमा यसले स्थान पाएको छ । यसमा सबैलाई छुने कविप्रतिभा मुनामदनमा अधिकतम प्रस्फुटित भएको पाइन्छ ।
kbs — Mon, 11/16/2009 - 19:00
kbs — Sun, 09/13/2009 - 09:40
उहिले उपन्यास, नाटकले अलि पहिले संस्मरणले उहाँलाई चर्चितै बनाएको हो । नेपाली साहित्यमा दरिलै उपस्थिति जनाउनुभएकै हो उहाँले । बीचको केही दशक हराए हराए जस्तै हुनुभएको उहाँ अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ
यो कथासंग्रहको नामबाट यसभित्र रहेका कथा र तिनका विषयवस्तुबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ । 'नीलिमा' अर्थात् प्रेमको प्रतीक र 'गाढा अँध्यारो' अर्थात् प्रेमविरोधी अवस्था । अँध्यारोले जीवनको विरोध गर्छ, प्रेमको प्रतिपक्षमा बस्छ । अँध्यारोमा राम्रा काम हुँदैनन् । नकारात्मकता र विकृति अँध्यारोमा ज्यादा फस्टाउँछन् ।
एउटी शरणार्थीको कथा
kbs — Sat, 06/13/2009 - 09:43
आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचान गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो होला ? हदै भए कल्पनासम्म गर्न सक्छौं हामी । यथार्थमा पीडा अकल्पनीय नै हुन्छ । त्यस्तै ध्रुव सापकोटाको उपन्यास 'अकल्पनीय' को घटनावस्तु एउटी यस्ती नारी पात्रसँग गाँसिएको छ जसले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान नै गुमाउनु परेको छ । निर्वासित हुनुपरेको छ । सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै उपन्यासकी मूलपात्र पेमाको वरिपरि केन्दि्रत रहन्छ कथावाचन ।
kbs — Sat, 04/04/2009 - 20:30
अंग्रेजीभाषी लेखिका सुषमा जोशीको केही महिनाअघि केही दिनको अन्तरालमा उनका दुई पुस् तक प्रकाशित भए, 'आर्ट म्याटर्स' र 'द एन्ड अफ द वल्र्ड' । 'आर्ट म्याटर्स' उनका नेसन पत्रिका (हाल बन्द) र कान्तिपुर अनलाइनमा प्रकाशित कलासम्बन्धी लेखको संगालो हो । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पुस्तकचाहिँ उनको कथा संग्रह 'द एन्ड अफ द वल्र्ड' हो जसका ८ कथामा समकालीन नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब भेटिन्छ ।
kbs — Mon, 03/30/2009 - 19:57
नेपाली साहित्यमा चम्किलो ताराको रूपमा चम्किएकी पारिजात दार्जीलिङ जिल्लाको चियाबगानमा वि.सं. १९९० फागुन ३० गते जन्म भएको थियो । संखुवासभामा पुख्र्यौली घर भएकी विष्णुकुमारी वाइवा -पारिजात)को २०११ सालमा काठमाडौँ प्रवेश भयो । नेपाली साहित्यमा वि.सं. २०१२ देखि नै हलचल मच्चाउन सफल पारिजातको 'शिरीषको फूल' मदन पुरस्कार -२०२२) प्राप्त छ । जुन उपन्यासको अङ्ग्रेजी अनुवाद संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्याण्ड युनिभर्सिटीमा पढाइ हुनु उनको विषेश सम्मान हो । हुरी बतासले रूखहरू हल्लाएझँै आधुनिक उपन्यास क्षेत्र हल्लाउन सफल 'शिरीषको फूल' उपन्यास घटना प्रधान हैन र यसको कथानक पनि सबल छैन ।
kbs — Sat, 03/28/2009 - 19:02
परदेश अनुभव, मनमा गढेका सुक्ष्म अवलोकनका दृश्यपट अनि प्रेमिल तरङ्गहरुको तीव्र अनुभूति मिसाएर स्रष्टा दामोदर पुडासैनी किशोरले एउटा कृति ल्याएका छन्- 'यात्राका प्रेमिल तरङ्गहरु ।'
kbs — Sat, 03/28/2009 - 14:12
आजको हाइकु-विस्फोट हेर्दा नेपाली साहित्यमा काव्य समृद्ध हुँदैजाने लक्षण सुस्पष्ट छ । यस लहरमा "हिउँको तन्ना" हाइकुसङ्ग्रह अगाडि आएको छ । कुष्ण बजगाईं साहित्यका सिद्धहस्त कवि हुन् भन्ने प्रमाण यस हाइकु सिर्जनाले प्रमाणित गरेको छ । कथाकार र नियात्राकारसमेत बजगाईं हाइकुकारमा उठेका छन् । बजगाईंका थोरै हाइकु सपाद देखिन्छन् भने धेरै हाइकु इमान्दारीसाथ बुनेर बजगाईंले बुलन्द बनाएका छन् । केही सेनरयो प्रकारका हाइकुले व्यङ्ग्य बलियोसँग बजारेका छन् ।
kbs — Sat, 03/21/2009 - 15:45
लेखक जगदीश घिमिरेको 'अग्निसूत्र' नामक कविता संग्रह भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यसमा उनका २०२५ देखि २०६२ सालसम्म रचित कविता संकलित छन् । घिमिरेको यो पहिलो कविता संग्रह हो । यी कविता कुनै फुटकर, कुनै गीत र कुनै मुक्तक स्वरूपका छन् । यी कविताले आफ्ना कालखण्डका कटुतम यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् ।